Madaxweyne Farmaajo oo gaaray Boosaaso | POHSOMEV.COM
Madaxweyne Farmaajo oo gaaray Boosaaso
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari, halkaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyay.
Wafdiga madaxweynaha safarka ku wehlinaya waxaa ka mid ah madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas, wasiiro iyo xildhibaano ka kala tirsan Golayaasha kala Duwan ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland.
Dad aad u fara badan oo gacmaha ku sida calanka Soomaaliya,islamarkaana taagan hareeraha waddooyinka magaalada iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ayaa Madaxwynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigiisa si heer sare ah ugu soo dhoweeyay magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda la kulmaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyo waxgaradka Boosaaso.
Wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa lugta soo mariyay deegaanka Carmo ee Gobolka Bari,halkaasi oo dadweyne fara badan ay ku soo dhoweeyeen.
Ammaanka magaalada Boosaaso ayaa si weyn loo adkeeyay,waxaana magaalada lagu dhex arkayaa Ciidamada amaanka oo feejigan.